Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nahazo $ 3.7 miliara dolara ny fizahan-tany ao Jamaika miaraka amin'ireo mpitsidika 700,000 ao anatin'ny 3 taona
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett dia nanondro fa nandray mpitsidika fito hetsy (700,000 3.7) mbola tsy nisy toa azy i Jamaica tao anatin'ny telo taona lasa. Nasongadin'ny minisitry ny fizahantany ihany koa fa ny nosy dia kasaina hahazo USXNUMXBillion amin'ny faran'ny taona, izay maneho ny vola vahiny roa heny amin'ny fe-potoana mitovy.
Niresaka tamin'ny fankalazana ny Sunset tao amin'ny Palms Resort, Negril, omaly faha-15, hoy ny minisitra Bartlett, "Ny fitomboan'ny fahatongavantsika sy ny vola azontsika dia tohanan'ny tanjona kendrena apetraka ao amin'ny drafitra 5x5x5 ao amiko. Tamin'ny taona 2016, ny tanjonay dia ny hitondra mpitsidika 5Million ary hahazo US5Billion amin'ny 2021, ary izahay izao dia eo amin'ny 4.5Million mpitsidika ny 5Million sy US3.7Billion amin'io vola 5Billion io. ”
Ny angon-drakitra ankehitriny avy amin'ny Birao Mpizahatany ao Jamaika, masoivohon'ny Minisiteran'ny Fizahantany, dia naminavina ny fitomboan'ny fahatongavan'ireo mpitsoa-ponenana ho an'ny volana septambra hatramin'ny desambra 7% na 807,796, izay hamarana ny taona kalandrie 2019 miaraka amin'ny fahatongavan'ny 2.68M na fiakarana 8.4% amin'ny taona 2018 . Ny vola azo tamin'ny taona feno nahatongavan'ireo fijanonana dia tombanana ho $ 3.49Billion na fiakarana 12% amin'ny taona 2018.
Ny data ihany koa dia mampiseho fa amin'ny ankapobeny, ny vanim-potoanan'ny ririnina any Jamaika dia mirongatra mafy amin'ny tsenan'i Kanadà amin'ny toerana vaovao 29,000; Etazonia mampiseho fisondrotan'ny tarehimarika indroa sy Amerika atsimo ary Karaiba mandeha tsara.
Miaraka amin'ny fijanonana sy ny fahatongavan'ireo mpitsangatsangana an-tsambo dia antenaina handray mpitsidika 4.303 tapitrisa ny nosy amin'ny faran'ny taona.
“Miorina amin'ireo tarehimarika ireo, ny fizahantany dia nanjary mpandray anjara lehibe amin'ny fitomboan'ny harinkarena faobe ao Jamaika. Fantatray koa fa miaraka amin'ity fitomboana ity dia misy andraikitra lehibe kokoa hiantohana ny fiarovana, filaminana ary filaminana eo amin'ny toerana haleha ary manolo-tena hatrany izahay hitandrina ny firaketana an-tsoratra ny fiarovana ireo mpitsidika. ” nanampy ny minisitra Bartlett.
Nasongadin'ny minisitra ihany koa fa ny fitomboana tsy mbola nisy toy izany sy ny vola azo dia tsy ho vita raha tsy misy ireo mpiasa manokan-tena amin'ity sehatra ity izay mijanona ho singa fototra amin'ny fahombiazan'ny sehatry ny sehatra.
Filentehan'ny masoandro tao amin'ny Palms Resort, izay nanamarika ny faha-15 taonany, no voalohany teto an-tany nahazo mari-pankasitrahana ho an'ny fizahan-tany maharitra maharitra amin'ny tontolo iainana Green Greenbe an'ny UK. Ilay toeram-pialan-tsasatra koa dia nahazo ny mari-pankasitrahana ho an'ny Governemanta Jeneraly ho an'ny famolavolana maritrano amin'ny ankapobeny. Ny fitantanana ny trano fandraisam-bahiny, notarihin'Andriamatoa Ian Kerr, dia nahafantatra mpikambana maro tamin'ny mpiasa nandritra ny taona maro nanompoany tao amin'ny hotely.
Vaovao misimisy momba ny fizahantany momba an'i Jamaika.